လိုင်ယွန်ဗွီဒီယိုသည်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားတွင် Calrec Apollo Audio Console | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုအသစ်လွင်ဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု Truck ကားများတွင် Calrec Apollo အသံ Console ထည့်သွင်း
မိုဘိုင်းယူနစ်၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားပွဲ Primetime သူဟာ Emmy (R) ဆုပေးပွဲနီကော်ဇော Preshow ခဲ့
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - အမေရိကန်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလိုင်ယွန်ဗီဒီယိုတစ်ဦးထံမှ Apollo ဒီဂျစ်တယ်အသံ console ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် Calrec အသံ လိုင်ယွန်ရဲ့ All-Calrec ရေတပ်အတွက် 14th Calrec console ကို marking က၎င်း၏အသစ်ကပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်အတွက် (OB) ထရပ်ကား, လိုင်ယွန် 11 ။ လိုင်ယွန် 14 အားကစားနှင့်ထိုကဲ့သို့သော ABC ရုပ်သံ, ESPN, Fox ကအားကစား, နဲ့ Yahoo အဖြစ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အတွတ်ဦးတည်နေပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဖြစ်ရပ်မှာ console ကို၏ပထမဦးဆုံးအဓိကအသုံးပြုမှုဟာ Nokia ကပြဇာတ်ရုံထဲမှာပြင်ပ 66th Primetime သူဟာ Emmy (R) ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအနီရောင်ကော်ဇော preshow ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခဲ့သည် Los Angeles မြို့အဘယ်မှာရှိဆုရာအရပျကိုယူပြသပါ။ လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုကို Yahoo များအတွက်လွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ထားတဲ့တိုက်ရိုက် Media Group သို့, ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့က Calrec consoles စသာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းအရည်အသွေး, နှင့် Apollo ဟာသူ့ရဲ့အရွယ်အစားအဘို့အထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပွိုကြောင်းပူဇော်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လျှင်နောက်တွဲယာဉ်ကိုယ်ထည်အမိန့်မတိုင်မီလိုင်ယွန် 14 အတွက် Apollo console ကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ "ချဒ် Snyder, လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုမှာအကောင့်မန်နေဂျာနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "တစ် All-Calrec စင်းကိုရှိခြင်းကျနော်တို့ပြီးသားစနစ်၏ပရိုဂရမ်းမင်းနားလည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလျင်အမြန်အကြီးတန်းအသံအော်ပရေတာကနေကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုအနည်းဆုံးငွေပမာဏနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုဒြပ်ပေါင်းများ Calrec ရဲ့ Hydra2 ဖိုင်ဘာကျော် networking, ထိုသူဟာ Emmy မှာကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်ဖြစ်ရပ်တည်နေရာကနေဝေးကွာဝေးကွာရွှေ့နှင့်အမျှပိုပြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံပေးဘို့ပိုမိုအသုံးဝင်ဖြစ်လာ၏။ "
လိုင်ယွန် 14 တစ် 53-ခြေလျင်ဖြစ်ပါသည် HD ဖြစ်ရပ်များအများအပြားအမျိုးအစားများကိုဖုံးအုပ်ဘို့အမြင့်မားစွယ်စုံဒီဇိုင်းနှင့်အတူ expando ထရပ်ကား။ အဆိုပါထရပ်ကား 144 faders, 1,020 လိုင်းများ, 148 မိုက်ကရိုဖုန်း / လိုင်းသွင်းအားစု, 64 AES Input / Output နဲ့ Apollo console ကိုပါရှိသည်နှင့် 512 512 MADI Input / Output အဖြစ်ဝေးလံသောအသံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှစ်ခုဝေးလံသောဖိုင်ဘာအသံပစ္စည်းများ x ။ အဆိုပါ Apollo console ကိုအဘယ်သူမျှမသွားချင်သည့်နေရာကိုအရေး, ကအားလုံးကိုအသံအချက်ပြကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မိုဘိုင်းယူနစ်ရဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးနှင့် Router ကိုအတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲအနီရောင်ကော်ဇော preshow အဘို့, လိုင်ယွန် 14 ပြဇာတ်ရုံ၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးအနိမ့် level မှာထွက်လာသည့် Nokia ကဇာတ်ရုံရဲ့ပြည်တွင်းရေးအိမ်သူအိမ်သားဖိုင်ဘာမှတဆင့်ထိုအဖြစ်အပျက်မှချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကကြေးနီကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့်အတူ OB ထရပ်ကားချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ရပြီလိုသော်လည်း, ကေဘယ်လ်ကြိုးများ၏အစွန်းရောက်အရှည် signal ကိုပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Calrec Hydra2 အသံကွန်ရက်က အဆိုပါခွက်တဆယ်အနီးရှိမိုက် preamps နေရာနှင့်မိုဘိုင်းယူနစ်ကနေ IFB နှင့် PL အဆင့်ဆင့်၏ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးခြင်းသည် Apollo ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
"ကျနော်တို့ကလိုင်ယွန်ဗီဒီယိုနှင့်အတူကြာမြင့်စွာ-ရပ်တည်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးခံစားပြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်သူဟာ Emmy သူတို့ရဲ့လွှမ်းခြုံအတွက်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကြီးထွားထဲမှာမသာအခန်းကဏ္ဍမှကျေနပ်နေကြသည်ပါတယ်," ဒန်စမစ်, Calrec ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းအလုပ်အမှုဆောင်ကဆိုသည်။ "လိုင်ယွန် 14 စက်မှုလုပ်ငန်းမတိုင်မီမမြင်ရပြီအချို့ဆန်းသစ် features တွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Apollo console ကိုအပါအဝင်ခေတ်မီရေးကိရိယာများနှင့်အတူ coupled သူများသည် features တွေ, ဤအသစ်သောထရပ်ကားလိုင်ယွန်ဗီဒီယိုများအတွက်အရေးပါသောအရင်းအမြစ်စေ - ။ သူတို့ကို ပို. ပင်ကြီးမားရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတဦးတည်း "
အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် Calrec အသံ နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် calrec.com.
YouTube ကို: www.youtube.com/user/CalrecCommunity
Facebook က: www.facebook.com/pages/Calrec-Audio/207623279289592
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Calrec/Calrec-EddieMarquez-ProductionMixer-LyonVideo.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Eddie Marquez, လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုရောနှောခြင်း, Calrec Apollo အသံစားပွဲပေါ်မှာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အသံလွှင်း Carlec အသံ သူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲ Preshow လိုင်ယွန်ဗီဒီယို OB 2014-08-28
ယခင်: Dejero နယူး Compact တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာဦးလွတ်မြောက်
နောက်တစ်ခု: တားမြစ်ထား Integrated Timecode လုပ်ပြီး Buddy ထဲသို့ Forscene ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် MovieSlate ကို iOS App ကို